Maitiro ekubatanidza mahedhifoni eBlules kuMac
Iwe munguva pfupi yapfuura watenga yakanaka yakanaka yeBluetooth mahedhifoni iwe aunofunga kushandisa pamwe chete neMac yako kuteerera mimhanzi, kutamba bhaisikopo odhiyo, kuita vhidhiyo kufona, nezvimwe. pasina kuvhiringidza vaunogara navo. Zvakanyanya kushata kuti, uchinge uchinge uchirwira neichi chishandiso kekutanga, hauna zano rekuti ungabatanidze sei pakati pamahedhifoni nekombuta.
Unoti sei? Mamiriro acho ezvinhu ndeechokwadi uye ungade here kuziva kana ndikakwanisa kukupa ruoko pane zvekuita? Zvirokwazvo ndinoita, Mwari ngazvisadaro. Muchokwadi, kana iwe ukapa maminetsi mashoma enguva yako yakakosha kwandiri, ndinogona kukufananidza, nenzira yakapusa asi kwete nekuda kwekushayikwa kwemashoko, maitiro ekubatanidza mabluetooth mahedhifoni kune mac.
Ipapo? Zvakadii pakupedzisira kuisa hurukuro padivi uye kubatikana? Yep? Kugona chose! Saka tora zvakanaka uye ugadzikane pamberi pekombiki yako yakatendeka yeApple-branded uye tanga kuteedzera iwo mirairo pane zvaunofanira kuita pazasi. Ini ndotofungidzira kuti, zvinopesana nezvaungafunge, haufanire kuita chero chinhu chakaomarara, une izwi rangu.
Maitiro ekubatanidza Bluetooth mahedhifoni paMac
Maitiro ekubatanidza akawanda eBluetooth mahedhifoni kune Mac
Ini handikwanise kubatanidza mahedhifoni eBluetooth kuMac: maitiro ekugadzirisa
Tisati tasvika pamwoyo wegwara, isu tichaenda kutsanangura kuti ndeapi mashandiro ekuitira batanidza mahedhifoni eBluetooth kuMac, pane zvimwe mabasa ekutanga zvaunofanirwa kuita kuti uone kuti zvinhu zvese zvinofamba mushe.
Zvandiri kureva, kunyatso kutaura, kuongorora kuti Bluetooth iri kushanda paMac yako, uye kana zvisiri, kuti uigadzirise. Kuti uite izvi, tinya pane icon Zvido zvemaitiro (iyo ine chimiro che giya giya) zvaunowana mukati dhoku bar uye, pahwindo rinowanikwa pane desktop, tinya mazwi acho MAKARALI USB, saka kana kuruboshwe ndiko kupinda Bluetooth: inoshanda haufanire kuita chero chimwe chinhu, zvikasadaro pinda bhatani Vhenekera bhaidhi kugadzirisa.
Pamusoro peizvo zvandichangoratidza, zvinogona kubva Kudzora nzvimbo macOS. Saka, tinya pane i icon switch mbiri iri kumusoro kurudyi kwechiratidziro uye ita shuwa kuti mutsamba nechinhu MAKARALI USB iripo mumenu inoratidzika ipapo yakanyorwa Sip. Kana zvisiri, tinya uye enda kumusoro EN chinja chakakodzera.
Uye kana Mac yako isina kubatana kweBluetooth nekuda kwekutadza kweyemagetsi (iyo module yeBluetooth yakavakirwa mune ese Apple makomputa), unogona kukurumidza kugadzirisa dambudziko nekutenga Bluetooth USB adapta, inova dongle inosangana necomputer USB chiteshi uye inopa kubatana kweBluetooth kukombuta. Izvo zvakachipa mutengo uye zviri nyore kwazvo kumisikidza, asi usati waenderera nekutenga kunogona, ita shuwa kuti chishandiso chakasarudzwa chine macOS-anoenderana madhiraivha.
Ndapedza nhanho dzekutanga pamusoro apa, ndingati isu tinogona pakupedzisira kutora chaicho chiito toenda toona, saka, maitiro batanidza Bluetooth mahedhifoni paMac. Kuti utange, shandisa iyo pairing mode (pairing) pamahedhifoni aunoda kubatana nekomputa yako: kazhinji, semuenzaniso, kugona batanidza Sony Bluetooth mahedhifoni kuMac uye nokuda batanidza JBL bluetooth headset kuMac, ingodzvanya ubatise iyo simba bhatani (Kana ikasashanda, kiyi kana mubatanidzwa wemakiyi ekutsikirira inofanirwa kuratidzwa mubhuku remushandisi yechigadzirwa).
Wobva wadzvanya pane icon Zvido zvemaitiro (iyo ine chimiro che giya giya) zvaunowana mukati dhoku bar pane yako Mac, sarudza chinhu MAKARALI USB Muhwindo rinovhura, mirira iyo zita remusoro mune zvinyorwa zvinyorwa uye chengeta bhatani Batanidza present next. Kamwe pairi pairi, mahedhifoni anofanirwa kuzvimisikidza pachawo seyakajairwa odhiyo yekuisa uye yekuburitsa chishandiso.
Kuti utarise zvaunofarira odhiyo, ita shuwa kuti mahedhifoni akaiswa seyeyekupedzisira yekuisa uye yekuburitsa chishandiso, uye kana zvisiri, gadzirisa nekudzvanya bhatani Kudzora nzvimbo (uya wandinaye switch mbiri) iri kumusoro kurudyi kwechiratidziro, wobva wadzvanya pane chinhu Ruzha mumenu iyo inovhura uye ive nechokwadi cheya yako mahedhifoni akasarudzwa. Kana zvisiri, sarudza ivo kubva pane yakatarwa runyorwa rwezvigadzirwa Kubva pane imwechete menyu iwe unogona zvakare kugadzirisa iyo odhiyo nhanho nekufambisa iyo hama inotsvedza.
Kugadzirisa zvimwe sarudzo zvine chekuita nezvinodiwa odhiyo, tinya pane chinhu Zvido zvemumhanzi iyo iwe yaunowana mumenyu iri pamusoro. Neimwe nzira, pinda mu Zvido zvemaitiro sekutsanangura kwandakaita pamusoro, tinya pane chinhu Ruzha muhwindo rinowoneka, sarudza kadhi Buda uye ita pane akasiyana sarudzo dziripo.
Uye kana ako mahedhifoni eBluetooth akashongedzerwa nemakrofoni uye iwe uchida kuve nechokwadi chekuti iyo yekupedzisira yakagadzirirwa dhizaini yekuisa, unogona kugara uchizviita kubva muchikamu Ruzha Del Zvido zvemaitiro macOS, nekusarudza iyo tebhu iyo tab Kupinda uye chishandiso kubva pane chinyorwa chiri pakati.
Kana iwe uine maviri eApple mahedhifoni neiyo H1 kana W1 chip, senge iyo AirPods Max kana kana uchida batanidza Beats Bluetooth mahedhifoni kuMac, uye kana iwe zvakare uine yako iPhone kana iPad, unogona nyore kubatanidza zvishandiso kutendeuka mahedhifoni e vachipindura kune iyo meseji inoonekwa pachiratidziro cheiyo smartphone kana piritsi.
Inotevera ichauya mahedhifoni. dzinowirirana otomatiki kuApple ID iyo yawakapinda mairi pa iPhone kana iPad uye zvichidaro kune zvese zvishandiso zvine chekuita neyekupedzisira, kusanganisira Mac. Gare gare, unogona kushandisa mahedhifoni paMac sekutsanangura kwandakaita mitsara mishoma pamusoro chero imwe modhi. yeBluetooth headset. Kuti uwane rumwe ruzivo, iwe unogona kuverenga yangu chaiyo gwara rekuti ungabatanidza sei AirPods kuMac.
Kana iwe uchifanira kufunga zvakare, unogona kubvisa kushamwaridzana pakati peMac neBluetooth mahedhifoni chero nguva nekuenda kuchikamu MAKARALI USB Del Zvido zvemaitiro macOS, nekusarudza chishandiso kubva pane chinyorwa chiri pakati pechiratidziro chakatarwa, nekudzvanya "X" padyo nezita rako uye pakupedzisira uchidhinda bhatani Bvisa.
Panzvimbo pe "chaiko" mahedhifoni, ungade here kuziva nzira yekubatanidza mahedhifoni eBluetooth kune yako Apple komputa? Zvakanaka, ndinofara kukuzivisai kuti hapana imwe nzira inofanirwa kuitiswa. Muchokwadi, matanho aunofanirwa kutora batanidza mahedhifoni eBluetooth kuMac Ivo vakafanana sezvandakaratidza mudanho rekutanga, hapana kana shanduko.
Kana ichocho chiri chinangwa chako batanidza akawanda maBlue mahedhifoni kune Mac yako, zvakakosha kuti komputa iiswe MAKARALI USB 5.0. Kuti utarise izvi, tinya pane icon Bitten apuro iri kumusoro kuruboshwe kwesikrini, sarudza chinhu Nezve Mac iyi Mune menyu inoratidzika, cindezela thebutton. Chirevo chirevo muhwindo rinovhura pane desktop, ipapo mune chinyorwa MAKARALI USB mune yemenyu menyu yeiyo yekuwedzera hwindo inoratidzwa uye ona ruzivo kurudyi.
Kana Mac yako ikasangana nezvinodiwa, batanidza mahedhifoni ese eBluetooth aunoda kushandisa nehurongwa, uchidzidzira maitiro andatsanangura mudanho pakutanga kwedzidziso, uye tanga kutamba odhiyo zvemukati zvaunosarudza pakombuta. .
Wobva wadzvanyaicon yekusarudza odhiyo sosi (uyo anayo Triangle nemafungu) muhwindo rekunyorera rauri kushandisa kutamba uye sarudza ese maBluetooth headset kuda kushandisa. Iwe unogona zvakare kuyedza kusanganisa kutamba nekugadzira iyo akawanda anobuditsa mudziyo uchishandisa yakakodzera macOS chimiro.
Kuti uwane rumwe nhungamiro pakushandisa akawanda maBluetooth odhiyo macomputer panguva imwe chete, ini ndinokurudzira kuti utarise gwara rangu rekuti ungabatanidza sei 2 vatauri veBluetooth, iyo inogona zvakare kugadziriswazve kune mahedhifoni.
Wanga uchinetseka kwemaawa "Ini handikwanise kubatanidza mahedhifoni eBluetooth neMac, ndinoigadzirisa sei?" Sei, kunyangwe uchitevera kuraira kwangu pane zvekuita, wanga uchiri kutadza kupedzisa mashandiro akafukidzwa nedzidziso iyi? Usaora mwoyo, unogona kuzvigadzirisa pachako.
Muchokwadi, mumamiriro ezvinhu akadaro, zvinokurudzirwa kuyedza kumhanya iyo gadzirisa zvakare ma module eBluetooth Computer. Izvo hazvina kuoma, asi zvinosanganisira kubvisa zvese zveBluetooth zvishandiso zvakabatana neMac.Kuti uzviite, tevedzera rairo pazasi
Sarudza chiratidzo Zvido zvemaitiro (iyo ine chimiro che giya giya) muna dhoku barClick on chinhu MAKARALI USB muhwindo rinovhura uye tarisa bhokisi padyo nesarudzo RatidzaiBlua mubhodhi yemenu;
Chengeta makiyi akatsimbirirwa chinja + sarudzo pane iyo Mac keyboard uye tinyaicon of MAKARALI USB (iyo iine "CHEPIRI") kumusoro kurudyi kwechidzitiro;
Sarudza chinhu Bvisa zvese zvishandiso uyezve izvo Dzorerazve module yeBluetooth kubva pane iyo menyu inovhura;
Tangazve Mac yako uye upfuure nepakati pekubatanidzazve mahedhifoni uye ese mamwe maBluetooth.
Kana kudzorerazve module yeBluetooth zvakare isina kupa zvaunoda, edza kumhanya iyo reset Dell'SMC Kuti unzwisise maitiro ekuita izvi, unogona kuteedzera iwo marongedzero mune angu chaiwo dzidziso pane iyi nyaya.
Kana pasina kuyedza kwakatsanangurwa pamusoro apa kuri kubudirira, unogona kufunga kubata iyo Apple rutsigiro, nefoni, Online kana uri munhu, uchiteedzera rairo dzandakakupa mune yangu chaiyo dzidziso pane zvekuita.
Maitiro ekudzima account yeTelegal
Maitiro ekuona kuda pane shamwari yako Instagram